Imamoglu wuxuu ugu yeeray Madaxweyne Erdogan Channel-ka Istanbul | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 Istanbulİmamoğlu wuxuu ugu yeeray Madaxweyne Erdoğan Channel İstanbul
26 / 12 / 2019 34 Istanbul, GUUD, Channel Istanbul, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Imamoglu wuxuu ugu yeeray madaxweynaha Istanbul madaxweynaha Erdogan
Channel Istanbul wuxuu u yeerayaa Imamoglu Madaxweynaha Erdogan: Duqa Magaalada Istanbul Metropolitan Mun Ekrem Imamoglu, Mashruuca Saldhigga Saldhigga Icerenkoy ee Dudullu-Bostanci ayaa baaritaan lagu sameeyay. Khudbadiisa kadib, İmamoğlu wuxuu ka jawaabay su’aalaha suxufiyiinta goobta dhismaha ee 20 mitir ka hooseysa dhulka wuxuuna yidhi, mis miyaad ku martiqaadeysaa Madaxweynaha Qalinjabinta Channel-ka Istanbul? Mise ballan baa sidii hore oo kale ah? Su’aasha ayaa ah, “Codsigaygu waa: Mudane Madaxweyne, Mudane Mr. Kemal Kılıçdaroğlu, xitaa hoggaamiyeyaasha kale ee siyaasadeed. Cid kasta oo aan ahay Iyagu ha martiqaadaan, ha noo yimaadaan. Aan u sheego dhammaan xogta sayniska iyo dhammaan aasaaska. Waan hubaa inaan qancin doono ”.
Z WAA IN AAN HADAAN DHAQAN KU SAMEEYNAAN ”
Emamoglu wuxuu carabka ku adkeeyay in ujeedooda ka dhanka ah Kanal Istanbul ay tahay inay ahmiyada siiyaan mashaariicda noocaan ah oo aan la maalgelin karin ama aan la amaahan karin 1,5-2 sano ee lasoo dhaafay xaaladaha adag ee dalka. Markii aan dhammeyno, waan casuumeynaa, waan isku duubnaa. Laakiin weligeen waligeen fadhiisi mayno oo aan dhahno 'Haa' shaqo kasta oo aan ahmiyad gaar ah la siinin, danta muwaaddinka, ee aan aheyn dabeecada iyo fadhiga magaaladan. Horey howshan, maheli doonno tilmaamaha noocan ah, waxaan ka soo horjeednaa fahamka u tarjumi lahaa ereyada tilmaamaha loogu talagalay shaqooyinka aan loo baahnayn iyo waxyaabaha aan loo baahnayn, waxaan ka heli doonnaa tilmaamaha dhammaan 16 milyan oo dad ah ayaa u gudbiyay dadkeenna. Waxaan isla joognaa halkaas. Mashaariicda quruxda badan ee waxtar leh, mashaariicda oo ay kujirto dareenka qaranku. Maxaa yeelay, waad faraxsan marka aad 16 milyan oo qof oo nabad ah, waxaa ka muuqatay sida tamarta Turkiga, "ayuu yiri.
GEL sida aan ugu fiicanaano ÇEKMEKÖY MEEL GEL
Cumhurbaşkanı Khudbaddii shalay ee ku saabsanaa Channel Istanbul, ayuu Madaxweyne Erdoğan soo saaray bayaan. Waxaad bartilmaameed u ahayd ereyadiisa. Madaxweynaha; 'First, milkiilaha mashruuca waa Republic of Turkey. Shaqadoodu waa inay u dhaqmaan si waafaqsan go'aanka dawladda. Xisaabaadka dayaca ah ee qaranka iyo sharciga ayaa daruuri ah ayaa siinaya xisaabta 'ayuu yiri. Maxay yihiin fikradaha aad ka qabtid arrintan? ”
Waxaan aqriyay hadalada Madaxweynaha Jamhuuriyadda anigoo raacaya qoraal kujira Çekmeköy. Kadib 'Sidee si fiican loogu shaqeeyaa Çekmeköy' kulanka. Run ahaantii, waxaan filayay sharraxaad dheeri ah oo ka timaadda Madaxweynaha Jamhuuriyadda Turkiga oo ku saabsan Kanal Istanbul. Laakiin waxaan wali maqalnaa jumlado la mid ah. Horay, "Waan qodi doonnaa, garaacnaa, jilcin doonaa, waan fadhiisan doonaa, shaqada ayaan fiirin doonaa" halkii xukunku ahaa, maanta 'Xisaabta ayaa siisa' xukunka ayaa lagu daray. Runtii ma fiicna. Anigana sax uma helin. Taas bedelkeeda, haddii aad leedahay go aan cad oo caddayn ah, caddaymahaaga; waad muujin lahayd. Waan fahmi karnaa wax. Waxba kamaan fahmin hadalada ka soo yeedhay Kanal Istanbul. Markaynu eegno maanta, dabcan, waxaynu leennahay masuuliyado xagga gobolka ah. Qaybaha qaar, Maxkamadda Xisaabaadka, Golaha Gobolka… Aniga waxaan ahay duqa. Laakiin halka ugu saxsan ee aan go aan ka gaadhayaa waa 16 milyan oo qof. Aniguna waan la xisaabtamayaa iyaga. Toddobaadkii hore, waxaan rajeynayaa inay raaceen; Horaan u siiyay 16 milyan oo qof xisaabta lix bilood. Waan sii wadi doonaa la xisaabtanka Waxa kaliya ee aan xisaabi karin; Channel Istanbul, oo aan ugu yeerayo dil, ayaa ah mowduuca bilowga Istanbul. Haddii uu bilaabo, uma xisaabtami karo dadka reer Istanbul. Horeba isma dhiibi karaan. Ilaa hadda, "Dhagarqaba" waxay yiraahdaan, tik Waxaan khiyaanay Istanbul haddii ay dhahaan, waxaa sii dheer dilkii Madaxweynaha run ahaantii, waxaan isku dayayaa inaan ixtiraamo.
SAAXADAHA maanta waa doorashada, kala duwanaanshuhu waa 1 milyan oo 600 oo kun ”
"Ma barteen way guuleysteen? ' xukun buu lahaa. Xaqiiqdii, adigu ma tihid guuleyste, mana ihi xisbiga CHP, AK Party, aqlabiyadda baarlamaanka ayaa soo jiidatay dikkat ”
Dabcan, wali fahmin fikradda fikradda ku-soo-ururinta wadahadalka. Waxaan filayaa inay tahay luuqadda cilmu-nafsiga ee qalad ka dhigaysa. Runtii, waxaan aaminsanahay in iyaga iyo dadka ku dhow dhow inaysan u ololeynin hawshan. Dadka ku jira golaha wasiirada midkoodna ma aaminsana taas. Laakiin waa maxay, xaggee lagu soo rogay? Boqolaal Olur waxaa laga soo qaaday xarumaha 'olur'. Lagama soo qaadin Hawlaha Hawlaha Dawliga. Lagama qaado Madaarada Gobolka. Lagama soo qaadin Dawladda Hoose ee Magaaladda Istanbul. Maxaa intaa ka badan? Si kale haddii loo dhigo, ma jiraan saynisyahano teel teleefishin ka hadla oo ka hadla - Waxaan ula jeedaa saynisyahanka. Maxaad qeexday, maxaad qeexday si dadku u qanciyaan? Kuma filna in kariska loo sameeyo doorashadii aan ku guuleysanay. Aad u murugoon. Waxaan iska cadaynayn inaynaan ku hawlanayn. Markaa haddii doorashadu maanta dhacayso, maahan in shil ay abuuraan 800 kun oo kala duwanaansho, 1 milyan 600 kun farqiga ayaa noqon lahaa Waxaan dareensanahay, fahmay oo aan arkay in Mudane Madaxweynuhu falanqeeyey, akhriyay, oo aad u akhriyay sifiican qof qabta doorashooyin badan oo maxalli iyo guud ahaanba khibraddiisa siyaasadeed ee qoto dheer. ”
"Ilaa iyo jawaabta jawaabta loo helo"
Shalay, waxaad wasiirada ku casuuntay aqoon isweydaarsiga. Waxay u muuqataa in wadahadalkani uusan ku koobnayn oo keliya wasiirrada, laakiin sidoo kale lala yeesho Madaxweynaha. Madaxweynaha ma casuumi doontaa? Mise jeceshahay inaad ballan sameysato sidii hore? Sababtoo ah waad isaga qancin kartaa? Sababta oo ah waxaad haysaa dukumiintiyo, sida aad u sharaxday tirooyinka sayniska shalay. Horumar noocan oo kale ah ma jiraa? ”
Soojeedinteenna ka kooban 15-ka qodob, waxaan horay uga wada hadalnay gebi ahaanba cilmi ahaan. muwaadiniinta Our; caqli ahaan, sayniska, waxaan isku daynay inaan sharaxno sababta tani u khaldan tahay waana sii wadaynaa. Laakiin waxaan arkaa taas; Mudane Madaxweyne, maanta wuxuu nooga sheekeeyay wixii hore. Sir, wuxuu yiri inta aan sameynayo siyaasadan, siyaasigan wuxuu yiri. Markii aan halkaas ku noqonno, waxaan dhahnaa: Cumhurbaşkanı Mudane Madaxweyne, waxaad tiri Buundada 3 waxay khiyaanay Istanbul, laakiin waad gashay. Mustaqbalka ayaan sheegayaa. Waxaan usheegay caruurta magaaladan inay ubadkooda imaan doonaan. Hadal ahaan saynis ahaan. Edin na qanciso, ”ayuu yidhi. OK. Waan ku farxi lahaa. Horey ayaan ugu sheegay tan iyo bishii Luulyo inaan ka hadli doono arrimaha muhiimka ah ee Istanbul. Saaxiibbaday aad bay u yaqaanaan; Mid ka mid ah 3-4 faylalkeyga ugu muhiimsan waa Kanal İstanbul. Waxaan wali sugeynaa ballan. Laakiin codsigeygu waa: Mudane Madaxweyne, Mudane Madaxweyne Kemal Kılıçdaroğlu, xitaa hoggaamiyeyaasha kale ee siyaasadeed way ka qeyb qaadan karaan. Cid kasta oo aan ahay Iyagu ha martiqaadaan, ha noo yimaadaan. Aan u sheego dhammaan xogta sayniska iyo dhammaan aasaaska. Waan hubaa waan karaa. Sababtoo ah marka loo eego mudnaanta bulshadaan marka loo eego waxa dhacaya maanta iyo marka la eego waxa mustaqbalka ku dhici doona iyada oo loo eegayo sababaha saxda ah, waxaan si cad ugu cadeyneynaa in shaqadan. Waxay kuxirantahay caqliga iyo sayniska, maahan siyaasada. Daneeneynin "Wuxuu yiri taasi". Waxaan sugayaa casuumaad. Madaxweynaha ha na casuumo. Duqa magaalada Kemal Kılıçdaroğlu ayaa isaguna iman doona. Hogaamiyeyaasha xisbiyada kale ee siyaasadeed. Anigoo ku hadlaya magaca dadka reer Istanbul, aan u sheegno qaylada mashruucan ku saleysan dilalka oo leh xog cilmiyeed.
XUQUUQDA TODUHAHA TODUUX
Ünkü Qoraalkaaga shalay, waxaad ku sheegtay in ay jiraan 30 milyan oo mitir murabac ah oo howlaha waxqabadka ah iyo in seddexda shirkadood ee ugu horeeya ay yihiin shirkado carbeed. Baaqaani wuxuu ku jiray ajandaha waxaana la sheegay inuu daboolido shirkadahaas carabta ah. Miyaad faahfaahin ka bixin doontaa seddexda shirkadood ee Carbeed? ”
Marka hore, aan iraahdo dhaqdhaqaaqa aagagga, ee maaha dhaqdhaqaaqa camalka. Si kale haddii loo dhigo, maxaa yeelay Wasiirka Magaaladan wuxuu adeegsaday xukun aad u hammi badan t Therer Ma jirin wax dhaqdhaqaaq ah oo cinwaankiisu yahay,, waa inaan sharraxaa. 30 milyan oo mitir murabac ah oo ku saabsan cinwaanka lahaanshaha. Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa iyo Beyoğlu, oo ay ku jiraan saddex degmo. Taasi waa wixii aan kuu sheegay. Si kale haddii loo dhigo, waa tafaasiil in 3da shirkadood ee ugu sareeya ay yihiin Carabtu oo sameeya maalgashiga ugu badan. Waxay khayaanayn doontaa hawshan haddii waxaas oo dhan la hor dhigo dhammaan arrimaha. Midda kale ayaa ka muhiimsan.
MA OGAHAY INAAN OGAYO WAXYAABAHA DIIWAANKA ”
Khudbadda Madaxweyne Erdoğan ee sanadkii 2011 sidoo kale ajandaha ayuu ku jiray. ' Cidina kama oga qadkaas maxaa yeelay waxay leedahay 'sharrax ujeedo' looga hortago. ”
Haddii Madaxweynuhu martiqaado dhaqdhaqaaqa muuqda ee 30 milyan oo mitir oo laba jibbaaran, waxaan u sheegi doonnaa mid mid. Halkaas waxaan ku xallineynaa shaqooyinka cinwaanka shaqsiyeed cidda ay tahay. Ma aqaan haddii magacyo yaab leh ay soo baxaan. Ma aqaan in midkoodna wax uun ogyahay. Laakiin faahfaahin aniga ah. Aniga ahaan mustaqbalka magaalada. Biyo, hawo, qaabka magaaladan uma xanaaqsana. Marka waxay noqon laheyd joornaal yar. Ayaa leh cinwaanka lahaanshaha. Arimahan waxbadan igama xiiseeyaan.
Ka bixitaanka cusub ee 'Imamoglu Channel' ee Istanbul 'Istanbul waa la aaminay tan iyo 1453…
Madaxweynaha Erdogan oo ballan-qaaday taageerada ay siineyso Jariidadda Yariman
Madaxweynaha Erdogan 3. Diyaar garowga garoonka ayaa dib loo dhigay
Jawaabta Channel Istanbul ee Imamoglu oo u socota Wasiirka Turhan: Dadku waxay hakiyeen Mashruuca 23 Juun
Warbixinta Channel Istanbul ee İmamoğlu oo u socota Wasaaradda Deegaanka sida Manifesto
Guddoomiyaha Ururka Isgaadhsiinta Erdogan